Nhau - Musika wevharuvhu musika mune yakanaka chimiro mune yechina kota
API602 ndokugadzira Steel Valve
Chemical uye Petrochemical
Cryogenics uye LNG
Pulp Maindasitiri uye Pepa
Maindasitiri evheji musika mune yakanaka chimiro mune yechina kota
Mumakota matatu ekutanga a2016, hupfumi hwenyika hwakaramba huchikura nekukurumidza, iine GDP yekukura chiyero che11.5%, izvo zvakapa musika wevharuvhu yebhora maitiro akanaka. Nekudaro, iyo mamiriro ekupisa kwehupfumi anoenderera, uye kune mamwe matambudziko akasarudzika anogona kushandura hupfumi kuve kupisa, izvo zvinoda kukurumidza kutorwa zvakanyanya. Zvinotarisirwa kuti kukurumidza kwekukura kweupfumi muchikamu chechina hakuzoshanduke. Sekureva kweindasitiri yevhavhave, kune zvakawanda zvinopesvedzera zvinhu, izvo zvakakodzera kutariswa.
Parizvino, nyika yangu ine chishuwo chakakura chekuvandudzwa kwevhavha uye kugadzirisa tekinoroji Mushure memakore ekutsvaga pamusika uye kudzidzira, indasitiri yevhavha inofanirwa kuve piyona ane ruzivo rwekuita mukuvaka. Kunyanya pamwe nekuunzwa kwemutemo wekutenga vharuvhu kutenga muna 2014, iwo mwero wevalveization munyika yangu wakwira kamwe kamwe kune imwe nhanho. China Valve Indasitiri Association yaisa pamberi chirongwa chekutanga shanduko yehunyanzvi hwekushandura michini indasitiri inotsigirwa nemari yenyika chikwereti mu2008, uye zvinofungidzirwa kuti nyika chikwereti rutsigiro rwemari ichawedzerwa gore rinouya.
Kubva pakuona kwekudiwa kwepamba, pane zvakawanda zvakanaka zvinhu, Yakakwira-kudyiwa uye kubvisa tekinoroji nemidziyo, kudzora kupinzwa kwemakiyi matekinoroji epamba akavandudza kugona, kukanzura mutemo wekuregeresa mutero wemakina akazara uye seti yakakwana yemidziyo, ita mutero zvinokurudzira uye kuregererwa kwemitero kwezvinhu zvakakosha, uye shandisa zvinokurudzirwa zvemitero kuChina’s inorema kuchera mavharuvhu neinjiniya mavharuvhu. , Mashini maturusi, uye michina yepeturu. Kuvakwa kwezvitima (kusanganisira njanji dzinomhanya-mhanya) kwawedzera. Ivhareji yekudyara pagore muna 2007-2010 ichapfuura mazana matatu emamiriyoni emadhora, uye kuvakwa kwemigwagwa mitsva yekumaruwa ichaisa mari inodarika mabhiriyoni mazana mana emamiriyoni. , Iyo indasitiri yemidziyo yechitima ichaita basa rakakura mukutyaira; kuvhara migodhi midiki yemarasha nekuvandudza mapoka makuru emarasha, kuumba mazana mashanu emabhiriyoni-matani emarasha, etc. Uye zvakare, mumisika yekukunze kwenyika, kuvakwa kwezvivakwa muAfrica, South America, South Asia neEastern Europe kuchangotanga, uye nzvimbo yemusika yakakura. Uyu uchave musika wakakosha wemakambani epamba kuti aongorore mhiri kwemakungwa mune ramangwana.
Kubva pakuona kwekuda kwekunze uye kupinza kwekumisikidza, China’Maitiro ekugarisa mumadhorobha ari kure nekupedzisa, uye kuvakwa kwenzvimbo nyowani kuri kukurumidza. Uye zvakare, epamba mainjiniya emagetsi zvigadzirwa zvakafambira mberi zvakanyanya maererano nehunhu uye sevhisi, uye kutsiva kwema brand ekunze arikuenderera mberi. Naizvozvo, zvinotarisirwa kuti makore matatu ekutanga achange ari nguva yekukura nekukurumidza mukuda kwemavheji einjiniya.
Post nguva: Chivabvu-22-2021
Wenzhou watts Valve Co, Ltd.
Kuchengetedzwa uye kutsiva API 600 G ...
Maitiro ekusarudza vharuvhu zvinhu pasi pepamusoro ...
Inoshanda musimboti wemagetsi bhora vharafu
Newsway Valve Yakakwira tembiricha bhora vharafu
Maindasitiri vharuvhu musika mune yakanaka chimiro ...
Kero: DongOu Industrial Zone, Oubei Yongjia Wenzhou Guta, Zhejiang China-325105
WENZHOU NEWSWAY VALVE CO., LTD. © Copyright - 2010-2022: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa. Hot Zvigadzirwa - Sitemap